module စက်တပ် rotary actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > Rotary လျှပ်စစ် Actuator > module စက်တပ် rotary actuator
module စက်တပ် rotary actuator
AOX-မေး စီးရီး ပြောင်းလဲပစ် စက်တပ် rotary actuaသို့r နိုင် ဖြစ် အသုံးချ သို့ အဆိုပါ လြှောကျလှာ လိုအပ် အချိုးကျ ထိန်းချုပ်မှု, နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် သို့rque နှင့် အကွာအဝေး ၏ 50N.m ~ 6000N.m.Our ထုတ်ကုန် များမှာ မဟုတ် သာ အဆိုပါ အခင်အရှင် စက်နှင့်ဆိုင်သော အင်တာဖေ့စ, ဒါပေမဲ့ လည်း အဆိုပါ ဝေဖန် အင်တာဖေ့စ တွင် အဆိုပါ ထိန်းချုပ်မှု စနစ်။ အဆိုပါ ခေတ်သစ် AOX-မေး စီးရီး ပြောင်းလဲပစ် စက်တပ် rotary actuaသို့r ထိန်းချုပ်မှု ယူနစ် တွေ့ဆုံ အဆိုပါ လုံခွုံရေး ဆက်သွယ်ရေး လိုအပ်ချက်များ ၏ အဆိုပါ ယေဘုယျ လယ်ယာ ထိန်းချုပ်မှု စနစ်။ ကှေးနိုငျသော ပစ္စည်းကရိယာ တည်နေရာ နှင့် configuration များ သို့ တှေ့ဆုံ အမျိုးမျိုးသော တွင်stallation လိုအပ်ချက်များကို။
(optional ကို: explosionproof / Exd IIC T5, IP68) ။
မော်တော် rotary actuator ပြောင်းလဲပစ် AOX-မေးစီးရီးများအတွက် 2. ဖြုတ် drive ကို Bush
- ISO5211 လွယ်ကူ mounting အခြေစိုက်စခန်းစံ။
- Bush ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီလုပ်ငန်းများ၌နိုင်ပါတယ်, လေးဆွဲထားနားရွက်ရိုးတံနှင့်လက်နှင့်အတူအနီးကပ်မထိုက်မတန်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
3. Indicator သည်မော်တော် rotary actuator ပြောင်းလဲပစ် AOX-မေးစီးရီးများအတွက်နွေဦးတို့ကထောကျ
- အမြင်အာရုံညွှန်ပြချက်၏ Direction အဖွဲ့စက်ရုံအားဖြင့်သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
- ညွှန်ပြချက်ပန်းကန်အောက်နွေမပြောင်းလဲသတ်မှတ်အနေအထား sustins ။
ကျနော်တို့ပါဝါစက်ရုံနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ, Shipbuilding HVAC, Waterworks, ကမ်းလွန်, Pull & စက္ကူ, ဓာတု, ရေနံဓာတုဗေဒ, ရေနံချက်စက်ရုံ, စွမ်းအင်, ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့, သတ္တုတွင်း, ဆေးဝါး, စားနပ်ရိက္ခာ & Beverage တစ်လုံလုံခြုံခြုံနဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြသည်။ မော်တော် rotary actuator ပြောင်းလဲပစ် AOX-မေးစီးရီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖိုးတန်ဖောက်သည်ကျေနပ်အောင်နှင့်မျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်မှအများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြေရှင်းချက်ပေးသညျ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ, ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို IS09001, ISO14001, အီး, ATEX, gost, EAC, SIL3, IP68, Cu-TR, ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်-အထောက်အထားအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်ရရှိသောအပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အပြည့်အဝကိုနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းပြသရာဖြစ်ပါတယ် နှင့် AOX-မေးစီးရီး၏အရည်အသွေးမော်တော် rotary actuator အာမခံပြောင်းလဲပစ်။
တစ်ဦးက: ကအထူးကအကြောင်း 3-5 ရက်အတွင်းကြာစိတ်ကြိုက်လျှင်ငါတို့ရှိသမျှသည်, စတော့ရှယ်ယာရှိမော်တော် rotary actuator ပြောင်းလဲပစ်ပုံမှန် AOX-မေးစီးရီး။
ဖြေအသေးစားအမိန့် airline.Large အမိန့်အသုံးပြုပုံအမြန်ဖွငျ့ရှေးခယျြပါလိမ့်မည်ပင်လယ်နားမှာကရှေးခယျြပါလိမ့်မည်။
ဒါဟာcustomerâ s ကိုတောငျးဆိုခကျြအရသိရသည်ပါလိမ့်မယ်။
မေး: Motor rotary actuator ပြောင်းလဲပစ်သည့် AOX-မေးစီးရီး၏စျေးနှုန်းကဘာလဲ?
A: ငါ့ကိုသတင်းအချက်အလက်များပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စျေးနှုန်းများပြီးတော့ကျနော်တို့ခန့်မှန်းခြေစျေးနှုန်းသာရည်ညွှန်းအဘို့ဖြစ်၏သင်ပေးနိုင်ပါသည်, ထိုမော်ဒယ်နှင့် function ကိုအပေါ်အခြေခံထားတယ်။ လိုအပ်မယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။
hot Tags:: module စက်တပ် rotary actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်
စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ rotary လျှပ်စစ် actuator
ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား rotary လျှပ်စစ် actuator
Rotary လျှပ်စစ် actuator နှင့် handwheel
ကျစ်လစ်သော စက်တပ် rotary actuator
ဉာဏ်ကောင်းသော စက်တပ် rotary actuator
ဒေသဆိုင်ရာ ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု rotary လျှပ်စစ် actuator